Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'izao tontolo izao ao amin'ny Syed Ahmad Khan | Narendra Modi - Fikarohana momba ny vatana
Hita taratra amin'ny: Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw, Aprily 2014
Nanontany ahy ny mpanohana Indiana momba ny ReincarnationResearch.com hoe iza ny praiminisitra vaovao ao India, Narenda Modi, mety ho tamin'ny lasa vao tafaverina. Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nametraka ity fanontaniana ity ho an'i Ahtun Re aho, mpitari-dalana amin'ny fitarihan-tserasera na dia naneho ny fahaiza-manaony aza i Kevin izay nanamarina ny fiainany taloha.
Ahtun Re dia nilaza tamiko fa i Narenda Modi dia politisiana miozolomana malaza iray izay iray amin'ireo voalohany nanolo-kevitra fa hiteraka fanjakana silamo iray, izay nitarika ho amin'ny fananganana an'i Pakistan.
Taorian'ny fikarohana sasantsasany, Ahtun Re dia nanamafy fa i Narenda Modi no vovoka indray ao amin'ny vatana vaovao Syed Ahmad Khan. Ampitahao ny sary amin'ny alàlan'ny fametrahanao ny cursor eo aminy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy mitovy amin'ny endriky ny endriky ny Syed Ahmad Khan sy Narenda Modi, anisan'izany ny volom-behivavy. Ny fikarohana momba ny firaisana ara-nofo amin'ny fambolena tsy miankina dia mampiseho fa ny fihodinan'ny volom-borona toy izany dia mety ho voatahiry mandritra ny androm-piainany iray manontolo:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao an'i John B. Gordon | Solon'anarana afo Jeff Keene
Ny fiainana taloha talenta: Na ny Khan sy i Modi aza dia mety karakarain'ireo mpikatroka politika sy mahomby.
Fiovana amin'ny finoana: Syed Ahmad Khan dia Miozolomana, raha ny an'i Narenda Modi no finoana Hindu. Ny fahalalana fa ny fanahy dia afaka manova ny finoana, ny firazanana ara-poko ary ny zom-pirenena mandritra ny androm-piainany amin'ny fiainana iray hafa dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa, satria mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo ny ankamaroan'ny fifandirana.